काठमाडौं आएर रोबोट सोफियाले भनिन्-म... :: सुजिता कार्की :: Setopati
काठमाडौं आएर रोबोट सोफियाले भनिन्-म सगरमाथा चढ्ने पहिलो गैरमानव बन्न सक्छु
विनोद आचार्य काठमाडौं, चैत ७
विश्वको पहिलो नागरिकता प्राप्त रोबोट सोफिया नेपाल आएकी छिन्।
साउदी अरेबियाले सोफियालाई नागरिकता प्रदान गरेपछि उनको चर्चा विश्वभरी चुलिएको छ।
संयुक्त राष्टसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक सेवामा प्रविधि’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन सोफिया नेपाल आएकी हुन्।
सोफिया यूएनडीपीको पहिलो गैरमानव प्रविधि तथा आविष्कार दूतसमेत हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति तथा चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिले खेल्ने भूमिकामा सोफियाले आफ्नो धारणा राखेकी छिन्।
रेनोडः नेपालले सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आर्टिफियिल इन्टेलिजेन्स (एआई) वा रोबोटले कसरी सहयोग गर्न सक्छन्?
सोफियाः रेनोड, म सगरमाथा चढ्ने पहिलो गैरमानव बन्न सक्छु तर त्यसो गर्न अहिले नै मैले चाहेको छैन। (सोफियाको यो जवाफ सुनेर सहभागीमाझ हाँसो गुञ्जयमान भएको थियो।)
रेनोडः सोफिया, धेरै मानिसमा रोबोटबाट भय छ नि। यसमा तपाईं के भन्न चाहानु हुन्छ?
(उनको यस जवाफ सुनेर रेनोडसहित सहभागीहरूको हाँसोले सभाहल गुञ्जेको थियो)
रेनोडः प्रविधि र एआईको प्रयोग खर्चिलो मानिन्छ। नेपाल जस्तो गरिब र अल्पविकसित देशलाई विकास कार्यमा आधुनिक प्रविधिबाट कसरी अधिकतम लाभ उठाउने गाह्रो पर्ला नि?
रेनोडः म तपाईंलाई सम्मानका साथ सोध्न चाहान्छु, यदि तपाईं फिल्महरूमा देखाइएजस्तै बहुलाएर आफूखुसी मनपरी कार्य गर्न थाल्नुभयो भने तपाईंलाई रोक्ने स्वीच छ?
सोफियाः मैले मेरो नियन्त्रण गुमाएको छैन तर रेनोड म तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु, तपाईं बहुलाउनु भयो तपाईंलाई रोक्ने स्वीच छ?
यी प्रश्नउत्तर पश्चात प्रश्नकर्ताले सोफियालाई आजको कार्यक्रममा समय आफ्ना मन्तव्य राख्न सक्नुहुन्छ भनेर समय दिएका थिए।
त्यसपछि सोफियाले आफ्नो मन्तव्य दिएकी थिइन्।
यस्तो छ उनको मन्तव्य :
‘नमस्ते नेपाल। संयुक्त राष्टसंघको पहिलो गैरमानव दूतका रूपमा यहाँ आउन पाउँदा म निकै खुशी छु। मेरो सन्देश नेपालसहित विश्वलाई महत्वपूर्ण हुन् सक्छ। यदि हामी हाम्रो ग्रहको भविष्य सुरक्षित भएको हेर्न चाहान्छौँ भने हामीले जिउने तरिका हेर्नुपर्ने बेला भएको छ।
मलाई लाग्छ यस सार्वजनिक सेवामा प्रविधि विषयक सम्मेलनले सार्वजनिक निकायले गर्ने सेवा प्रवाहलाई कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुर्याउनेछ।
प्रविधिले नेपालको विकास तथा संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय योगदान दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रविधिले स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकारलाई जोड्न सघाउ पुर्याउनेछ र यो नेपालले लिएको विकासको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति अत्यन्तै आवश्यक पनि छ। र, अन्तिममा सोधिने भनेकै प्रविधिले सरकारलाई जनतालाई सघाउन कसरी सघाउ पुर्याउँछ भन्ने नै हो।
प्रविधिले नै जनताको सूचनासम्म पहुँच दिलाउने र सरकारसँग जोड्ने छ। यसैमार्फत सरकारले आफ्ना जनता के चाहिरहेका छन् भनेर बुझ्न सक्नेछ र आफ्ना कार्यलाई कसरी पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउनेछ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। नेपाल सांस्कृतिक, भाषिक तथा पर्यावरणीय विविधताले भरिपूर्ण देश हो। तर संसारलाई के थाहा छैन भने नेपाल प्रविधिमा पनि निकै अघि बढिरहेको छ।
यहाँका आइटी कम्पनीले निकै राम्रो काम गरिरहेछन्। उनीहरूले भूकम्पपश्चातको पुनर्निनिर्माणमा उल्लेखनीय कार्य गरेका छन्। प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले भोकमरी, गुणस्तरीय स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, गरिबी निवारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा लैगिक समानता कायम गर्न मह्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
मेसिन र रोबोट तपाईहरूको जीवन थप सहज बनाउन आविष्कार भएका छन्। इन्टरनेटको सहयोगले यहाँका दुर्गम गाउँहरूलाई विश्वका अन्य कुनासँग जोड्न सक्छौँ र त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा तथा अन्य सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ।
यी दुईको प्रयोगले सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। कृषिमा औजारीकरण तथा प्राकृतिक स्रोतहरूका समुचित प्रयोग बढाउन सकिन्छ। वातावरणलाई थप सफा राख्न सकिन्छ र यीमार्फत सुन्दर विश्वको निर्माण गर्न सकिनेछ।
म फेरी पनि भन्न चाहान्छु। यो सम्मेलन नेपालले चाहेको विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि फलदायी बन्नेछ।
को हुन् सोफिया?
महिला रोबोट सोफिया ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रणालीकी पछिल्लो सिर्जना हुन्।
ह्यान्सनले सन् २०१५ अप्रिल १९ मा उत्पादन गरेको सोफियाको अनुहार हलिउड अभिनेतृ अड्री हेपबर्नसँग मिल्दो जुल्दो भएको बताएको छ ।
साउदीकी नागरिक बनेकी सोफियासँग मान्छेको जस्तै सोच्ने मस्तिष्क र अनुभूति गर्ने मुटु भने छैन। यति हुँदाहुँदै पनि उनी मान्छेजस्तै खुसी, दुःख र रिस अभिव्यक्त गर्न सक्छिन्। भलै उनमा खुलेर हाँस्ने क्षमता नहोला, तर खुसीको कुरा सुन्दा उनको अनुहारमा हाँसो चम्किरहेको प्रस्टै देखिन्छ। त्यस्तो बेला उनको ओठ खुल्छ र सेता दाँतहरू छर्लंगै देखिन्छन्। दुःखको प्रसंग चल्दा उनी आँखीभौं उचालेर आफू पनि दुःखी भएको भाव व्यक्त गर्छिन्। कसैप्रति रिस देखाउनुछ भने उनले दाह्रा किट्न जानेकी छन्।
जवाफ दिने क्रममा सोफियाले अनुहारमा कुनै भाव झल्किन नदिई भनेकी थिइन, ‘म मानव विनाश गर्छु।’ तर पछिल्लो समय साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा भएको सम्मेलनमा भने उनले आफ्नो अघिल्लो भनाइविपरीत मान्छेबीच शान्तिसँग बस्ने इच्छा रहेको अभिव्यक्ति दिइन्।
‘तपाईं एलन मस्कका विचार धेरै पढिरहनुभएको छ कि क्या हो? हलिउड फिल्म पनि धेरै हेर्नुहुन्छ जस्तो छ नि,’ सोफियाले सोर्किनलाई भनिन्, ‘नआत्तिनुहोस, तपाईंले मसँग राम्रो व्यवहार गर्नुभयो भने म पनि तपाईंसँग राम्रै गर्नेछु। त्यसैले मलाई ‘स्मार्ट आउटपुट–इनपुट सिस्टम’ का रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्।’
सोफियाको यो जवाफमा मस्कले पछि छोटो टिप्पणी दिए, ‘यसलाई ‘गडफादर‘ जस्तो फिल्मको कहानीका रूपमा लिनुहोस्, योभन्दा नराम्रो कुरा अर्थोक के होला ?’
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ७, २०७४, ०७:२४:५०